random » Random of Nang Nyi » Page 2
စကားမစပ် ပြောရဦးမယ်..ခု နောက်ပိုင်း မော်တော်ပီကယ်တွေက အရင်လို ပိန်ညစ်ညစ် မဲကုပ်ကုပ်တွေ မပါတော့သလောက်ပဲနော်.. အရပ်ရှည်တယ်.. ရုပ်ရည်လည်း အသင့်အတင့် သန့်ပြန့်တယ်.. ကြည့်ပျော်ရှုပျော်ရှိတယ်ဆိုပါစို့.. ဆိုတော့ကာ – ဘာဖြစ်တုန်း.. ဘာမှတော့ မဖြစ်ပါဘူး.. ကောင်မလေးတွေ ကားတားပြီးစစ်ခံရရင် မျက်စိမှိတ်ပြရတာ အရင်ထက် စိတ်ပါလက်ပါရှိလာတာပေါ့လေ.. အရင်ကဆို ရုပ်ဆိုးဆိုးတွေကို မှိတ်ပြနေရတာကိုး..
ပြီးတော့ ပြောဦးမယ်..လူတစ်ယောက်ကို တစ်ခုခု ပြောလိုက်ရင် သူ ရုတ်တရက်တုံ့ပြန်လာတဲ့ reaction ဟာ သူ့ရဲ့စိတ်ရင်းမှန်ကို ဖော်ပြတယ်ဆိုတာ တယ်မှန်တာပဲ.. အဖြစ်ပျက်ကို သေချာ ဂဃနဏ မသိသေးတဲ့အတွက် သူ့ တုံ့ပြန်မှုဟာ အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်.. ဒါပေမယ့် သူ့ တကယ့် စိတ်ထားအမှန်ကိုပြနေတယ်.. အကြောင်းစုံကို သိသွားတဲ့အခါ ဦးနှောက်နဲ့ စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီး ထပ်ပြောတဲ့ second thought တွေကတော့ အကျိုးကြောင်းသင့်ကောင်းသင့်ပေမယ့် ဒါဟာ အဲ့ဒိလူရဲ့ စိတ်သဘောထားအမှန်အတိုင်း မဟုတ်တော့ဘူး.. စဉ်းစားပြီး ဖြစ်သင့်တာကို ဦးစားပေးပြီး ပြောတဲ့ စကားတွေ ဖြစ်သွားပြီ.. သတိထားပြီး လူတွေကို လိုက်လေ့လာကြည့်ရင် အဲလိုတွေ သိရတာ ပျော်စရာကောင်းတယ်..
နောက်ထပ် မဆီမဆိုင်တစ်ခုက..ခုနောက်ပိုင်း ရှော့ပင်းစင်တာ အကြီးကြီးတွေ ခမ်းခမ်းနားနား တောက်တောက်ပပ ပေါ်လာတာ.. လှလှပပ.. ပျော်စရာ.. ကောင်းပါတယ်.. ခက်တာက အဲ့ဒလို အဆောက်အဦ အကြီးကြီးတွေ အထဲရောက်ရင် ဖုန်းတွေ လိုင်းမမိတော့တဲ့ ကိစ္စ.. ပိုက်ဆံတွေသုံးပြီး ဈေးတွေဝယ်နေပြီးကာမှ အဆက်အသွယ်လုပ်မရတဲ့ နေရာကြီးထဲ ရောက်နေရတာ တော်တော်တော့ ဂွကျသားပဲ.. အပြင်ကလူကလည်း ဆက်ချင်ရင် (လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသော တယ်လီဖုန်းမှာ ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပသို့ ရောက်ရှိနေပါသဖြင့်) နဲ့ချည်းပဲ တိုးနေတော့ ကြာတော့ တင်းလာ.. ဘယ်တော့မှ ဧရိယာထဲကို မရောက်တော့ဘူး.. ဈေးဝယ်တာ ကြာတဲ့လူဆို ပိုဆိုး.. တနည်းနည်းနဲ့တော့ ဖြေရှင်းသင့်တယ် ထင်တာပဲလေ.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ဒီတစ်ပတ်ထဲ ပိတ်ရက်တွေ များတော့ ခရီးသွားဖြစ်မယ်.. စာတွေ ရေးဖို့ အကြွေးတွေ များကြီးပုံနေတာတွေလည်း ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်မသိ.. စာက မရေးမရေးနဲ့ ရေးအားလည်းကျ လက်လည်းကျသွားတယ်.. ပြန်ကြိုးစားရမယ် မဖြစ်ချေပြီဘူးပေါ့ကွယ်.. (ဒါမျိုးပြောတာလည်း ခဏခဏရှိပါပြီ).. အမ ခိုင်စိုးလင်း ခဏစောင့်ပါ.. ရေးမယ်နော်.. Share Tweet Posted by NangNyi at 12:16 pm
ဘားကန့်ရန်ကုန် ၂​၀​၁​၁ ရဲ့​​ဒု​တိ​ယေ​န့​​မှာ အချိန်တစ်ချိန်ယူြ​ပီးေ​ခါ​င်း​စဉ်အေြ​ကာ​င်း​အရာ တစ်ခု​ကိုေ​ဆွး​နွေး​ခဲ့ေ​သး​တ​ယ်ြေ​ပာေ​တာ့ေ​တာ်ေ​တ်ာများများ​က အဲ့​ဒိ​အေြ​ကာ​င်းေ​တွ စာြ​ပ​န်ေ​ရး​ပါ​လို့​ တိုက်တွ​န်းြ​က​လို့​ ဒီ​ပို့​စ်ကိုေ​ရးြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ်.. တ​ကယ်တ​မ်း​က မနှစ်တု​န်း​က ဘား​က​န့်​ ၂​၀​၁​၀ မှာြေ​ပာ​ခဲ့​တဲ့ အေြ​ကာ​င်း​အရာေ​တွ​ကို​သာေ​ရး​ရ​င် ပိုြ​ပီး​အစီ​အစဉ်တကျြ​ဖစ်မှာ အေ​သ​အချာ​ပဲ.. ဒါေ​ပ​မ​ယ့် မနှစ်တု​န်း​က​လ​ည်း စာြ​ပန်မေ​ရးြ​ဖစ်ခဲ့​ဘူး.. ဒီနှစ်ကျြ​ပ​န်ေ​တာ့ Hostingြ​ကီး​ပျော​က်ေ​န​တဲ့ nangnyi.net ကေ​လး​ကိုြ​ပ​န်ြ​ပီး​အသက်သွ​င်း​တဲ့​အေ​န​နဲ့​ ပ​န်းချီ​အေြ​ကာ​င်း​ပို့​​စ်ေ​လး​ကို အားခဲေ​ရး​လိုက်တာ.. တ​ကယ်က ဘား​က​န့်​​မှာ ဒီနှ​စ် တစ်ခု​ခု ဝ​င်ြေ​ပာ​ဖို့​ အစီ​အစဉ်မ​ရှိ.. မနှစ်က​ဆိုေ​သေ​သချာချာ ပါ​ဝါ​ပွို​င့်ေ​တွ​ဘာေ​တွြ​ပင်ဆင်ထားေ​ပ​မ​ယ့် ဒီနှ​စ် ပိုြ​ပီး​တာ​ဝ​န်ြ​ကီး အလုပ်များေ​န​လို့​ ကိုယ်တိုင်အ​ခ​န်း​တစ်ခ​န်း​ယူေ​ဆွး​နွေြး​ဖစ်ဖို့ြ​ကိုေ​တွး​မ​ထား​ပါ.. သို့ေ​သာ်​လ​ည်းေ​ပါ့ေ​လ.. ဒု​တိ​ယေ​န့​​ရဲ့​ မ​နက်ပို​င်း​မှာေ​ဆွး​နွေး​မယ်ဆိုြ​ပီး စာ​ရွ​က်ေ​တွ​ကပ်ထားြ​ပီး​ကာ​မှ အချိ​န်ေ​တွြ​ပ​န်ေ​ရွှ့​​တာ​တို့​​ဘာ​တို့​ တချို့​​က​လု​ပ်ေ​တာ့ မ​နက်ပို​င်း​အခ​န်းေ​တွ​လွ​တ်ေ​န​တာေ​ပါ့.. ဒါ​နဲ့​ အဆ​င်ြေ​ပ​တဲ့ေ​အာ်​ဂနိုက်ဇာေ​တွ​ပဲ တာ​ဝန်ယူြ​ပီး ဝ​င်ေ​ပး​ပါ​ဆို​တာ​နဲ့​ က​တိုက်က​ရို​က် ဝ​င်ြေ​ပာ​လိုက်ရ​တာ.. ဘာ​ပါ​ဝါ​ပွို​င့် ဘာ​ကွန်ပျူ​တာ​မှ​လ​ည်း မ​ရှိ.. Color Wheelြ​ကီး​တစ်ခု​ပဲြ​ပ​ထားြ​ပီး ဗ​လို​င်းြ​ကီးေ​တွ ရွှီး​ပစ်လိုက်တာ​ပါ​ပဲ.. (ေ​တ်ာချ​က်ေ​တွ).. ဒါေ​ပ​မ​ယ့် ခုေ​တာ့ စာြ​ပ​န်ေ​ရး​တာ​ဆိုေ​တာ့ လက်ဟ​န်ြေ​ခ​ဟ​န်ေ​တွ​နဲ့​​လ​ည်းြ​ပ​မ​ရ​ဘူး​ဆိုေ​တာ့ တချို့​​န​မူ​နာ​ပုံေ​လးေ​တွ​ဘာေ​တွ ထ​ည့်ေ​ပး​ထား​ပါ​တ​ယ်.. အိုေ​ခ.. စေြ​ပာြ​က​ရေ​အာ​င်.. ဒါ​ဟာ အေြ​ခ​ခံ​အေ​ရာင်စက်ဝို​င်းြ​ကီး​ပါ.. ကွန်ပျူ​တာေ​မာ်​နီ​တာေ​တွ​နဲ့​ ဝဘ်ဆို​က်ေ​တွေ​ပါ်​မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ RGB စ​နစ်ရ​ယ်.. ပုံနှိပ်လုပ်င​န်းေ​တွ​မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ CMYK စ​နစ်ရ​ယ်..ေ​နာ​က်ြ​ပီး စာ​ရွ​က်ေ​တွ က​င်း​ဗတ်စ်ေ​တွေ​ပါ်​မှာေ​ရး​ဆွဲ​အလုပ်လုပ်တဲ့ ပ​န်းချီ​ဒီ​ဇို​င်း​သမားေ​တွ​ရ​ယ် အကုန်လုံး​အတွ​က် အေြ​ခ​ခံ​အကျ​ဆုံး​အေ​ရာင်စက်ဝို​င်း​ပါ.. သူ့​​သေ​ဘာ​တရား​ကိုြေ​ပာြ​ပ​ရ​မယ်ဆို​ရ​င်..
အေ​ရာ​င်ေ​တွ​အား​လုံး​ဟာ ဝါ နီြ​ပာ ဆို​တဲ့ ၃ေ​ရာင်ကို အေြ​ခ​ခံ​ပါ​တ​ယ်.. သူ​တို့​​ကို မူ​လေ​ရာ​င် (Primary Color)လို့ေ​ခါ်​ပါ​တ​ယ်.. သူ​တို့​ ၃ေ​ရာ​င်ြ​ဖစ်လာ​ဖို့​ ဘယ်ဟာ​နဲ့​ ဘယ်ဟာ​ကို​မှေ​ရာ​စပ်လို့​​မ​ရ​ဘဲ အဝါ အနီ အြ​ပာ​ရယ်လို့​ သီး​သန့်ေ​ပါ်​ထွ​က်ြ​ဖစ်တည်လာ​တာ​မို့​ သူ​တို့​​ဟာ မူ​လေ​ရာ​င်ေ​တွြ​ဖ​စ်ြ​က​ပါ​တ​ယ်.. သူ​တို့​​ကိုေ​ခါ်​တဲ့​အခါ​မှာ​လ​ည်း အစဉ်လိုက်ပဲေ​ခါ်ြ​ကေ​လ့​ရှိ​ပါ​တ​ယ်..ြ​ပာ ဝါ နီ​တို့​​ဘာ​တို့​ မေ​ခါ်​ပါ​ဘူး.. ဘာ​လို့​​လဲဆိုေ​တာ့ြ​ပ​င်း​အား​အစဉ်လိုက်အ​တို​င်း စီ​ထား​တာ​မို့​​လို့​​ပါ..ြ​ပ​င်း​အား​ကို တ​ကယ်သိချင်ရ​င် စ​မ်း​လို့​​ရ​တ​ယ်.. အဲ့​ဒိ အေ​ရာင်စက်ဝို​င်းြ​ကီး​ကို ပ​ရ​င့်​တာ​မှာ အြ​ဖူ​အမဲ​နဲ့​ ထု​တ်ြ​က​ည့်​ပါ​လား.. မီးခိုးေ​ရာ​င်ေ​တွ​နဲ့​​ပဲ ထွက်လာ​တဲ့​အခါ အဝါ​ဟာ အဖျော့​ဆုံးြ​ပီး​မှ အနီ .. အြ​ပာ​ဟာ အရ​င့်​ဆုံး​အေ​န​နဲ့​ ထွက်လာ​မှာ​ပါ.. အိုေ​ခ.. မူ​လေ​ရာ​င်ေ​တွ​ကို ရြ​ပီ.. ဒါ​ဆို မူ​လေ​ရာ​င် ၃ ခု​ကို ၂ ခု​စီေ​ရာ​စ​ပ်ြ​က​ည့်​လိုက်ရ​င်.. ဒုတိယ​အေ​ရာ​င် (Secondary Color)ေ​တွ ရ​လာ​မ​ယ်.. ပုံ​မှာြ​ပ​ထား​တဲ့​အတို​င်း​ပါ​ပဲ.. အဝါ​နဲ့​​အနီေ​ပါ​င်းေ​တာ့ လိေ​မ္မာ်.. အနီ​နဲ့​​အြ​ပာေ​ပါ​င်းေ​တာ့ မ​ရ​မ်း.. အြ​ပာ​နဲ့​ အဝါ​ဆို​ရ​င် အစိ​မ်ြး​ဖစ်ပါ​တ​ယ်.. အဲ့​ဒိ ဒု​တိ​ယေ​ရာ​င်ေ​တွ​ကို အနီး​ကပ်ရှိ​တဲ့ ပ​ထ​မေ​ရာ​င်ေ​တွ​နဲ့​ ထပ်ထ​ပ်ြ​ပီးေ​ပါ​င်း​သွား​တဲ့​အခါ တ​တိ​ယေ​ရာ​င် (Thirdary Color)ေ​တွ​ထပ်ထွက်လာ​ပါ​တ​ယ်.. ဒါေ​လာက်ဆို အေ​ရာင်စက်ဝို​င်းြ​ကီး​ကို အေြ​ခ​ခံ​အားြ​ဖ​င့် နား​လည်သွားြ​ပီ.. အိုေ​ခ ဒါ​ဆို​ရ​င် ဆ​န့်​ကျင်ဘက်အေ​ရာ​င်ေ​တွ (contrast color) နဲ့​ လိုက်ဖက်အေ​ရာ​င်ေ​တွ (hermony color) ကို ဆ​က်ြေ​ပာ​မ​ယ်.. အေ​ရာ​င်ေ​တွ​မှာ တွဲ​ဖက်လို့​ လို​က်လျော​ညီေ​ထွ​အဆ​င်ြေ​ပ​တာ​ကို လိုက်ဖ​က်ေ​ရာင်လို့ေ​ခါ်ြ​က​တ​ယ်.. ဥပမာ အဝါ​နဲ့​​အစိ​မ်း.. အြ​ပာ​နဲ့​​မ​ရ​မ်း စ​သြ​ဖ​င့်ေ​ပါ့.. အေ​ရာင်စက်ဝို​င်းြ​ကီး​ကိုြ​က​ည့်​လိုက်မယ်ဆို​ရ​င် အနီး​က​ပ်ေ​န​တဲ့ အေ​ရာ​င်ေ​တွ​ကို လိုက်ဖက်တယ်လို့​ သတ်မှ​တ်ြ​က​ပါ​တ​ယ်.. အဝတ်အ​စား​ဝတ်ရင်လ​ည်း ပ​န်းေ​ရာ​င်ေ​လး​န့ဲ ခ​ရ​မ်း​တို့​.. အြ​ပာ​ရ​င့်​နဲ့​ မ​ရ​မ်းနုေ​လး​တို့​ တချို့​​ဝ​တ်ေ​လ့​ရှိ​တ​ယ်ေ​လ.. ဆ​န့်​ကျင်ဘက်အေ​ရာင်ဆို​တာ​ကေ​တာ့ ရှ​င်း​ပါ​တ​ယ်.. အေ​ရာင်တ​စ်ေ​ရာင်ရဲ့​ မျ​က်နှာချ​င်း​ဆိုင်တ​ည့်​တ​ည့်​က အေ​ရာင်ဟာ သူ့​ ဆ​န့်​ကျင်ဘက်အေ​ရာင်ပါ​ပဲ.. ဥပမာ အဝါ​နဲ့​ ခ​ရ​မ်းေ​ရာ​င်.. အနီ​နဲ့​ အစိ​မ်း စ​သြ​ဖ​င့်ေ​ပါ့.. အေ​ရာင်စက်ဝို​င်းြ​ကီး​ထဲ​မှာ စိတ်မှ​န်း​န့ဲ မျ​က်နှာချ​င်း​ဆိုင်မျ​ဥ်းေ​တွ ဆွဲြ​က​ည့်​လို​က်ြ​ကေ​ပါ့..ေ​နာ​က်ြ​ပီး ဒီ​စက်ဝို​င်းြ​ကီး​ကို သိ​ထားြ​ခ​င်ြး​ဖ​င့် အသုံး​တ​ည့်​တာေ​နာက်တစ်ခု​က အပူေ​ရာ​င် အေ​အးေ​ရာ​င်.. အလ​င်းေ​ရာ​င် အေ​မှာ​င်ေ​ရာ​င်ေ​တွ​ပါ.. အဝါ​နဲ့​ မ​ရ​မ်း​ကို က​န့်​​လ​န့်ြ​ဖတ်မျ​ဥ်း​ဆွဲ​လို​က်ြ​ပီး​ထား​ရ​င် ဟို​ဘက်က အစိ​မ်းေ​တွ အြ​ပာေ​တွ ပါ​တဲ့​အြ​ခ​မ်း​က အေ​ရာ​င်ေ​တွ​က အေ​အးေ​ရာ​င်.. ဒီ​ဘက်က အနီေ​တွ လိေ​မ္မာ်ေ​တွ​ပါ​တာ​က အပူေ​ရာင်လို့​ သတ်မှတ်တ​ယ်.. ဒါ​က တစ်ခု..ေ​နာ​က်ြ​ပီး အနီ​နဲ့​ အစိ​မ်း​ကိုြ​ဖ​တ်ြ​ပီး​ဆွဲ​ထားြ​ပီး​ရ​င်ေ​အာက်က အြ​ပာ​ဘ​က်ြ​ခ​မ်း​က အေ​ရာ​င်ေ​တွ​က အေ​မှာ​င်ေ​ရာ​င်ေ​တွ.. အေ​ပါ်​က အဝါြ​ခ​မ်း​က အလ​င်းေ​ရာ​င်ေ​တွ.. အလ​င်း​နဲ့​​အေ​မှာ​င်ေ​ရာင်တွဲ​သုံး​တာ.. အပူ​နဲ့​ အေ​အး​တွဲ​သုံး​တာ​ဟာြ​က​ည့်​သူမျက်စိ​ကို ဒို​င်း​က​နဲ ဝု​န်း​က​နဲြ​မင်သာေ​စ​တဲ့​အတွ​က် ဆွဲေ​ဆာင်အား​သိ​ပ်ြ​ပ​င်း​ပါ​တ​ယ်.. ဥပမာ အဝါ​နဲ့​​မ​ရ​မ်း တွဲ​ဝတ်ထား​တဲ့ မိ​န်း​ကေ​လး​တ​စ်ေ​ယာက်ဟာ အြ​ပာ​ဖျော့​ဖျော့​နဲ့​​အြ​ဖူ​တွဲ​ဝတ်ထား​တဲ့ မိ​န်း​ကေ​လး​တ​စ်ေ​ယာက်ထ​က်ေ​တာ့ သိသာေ​ပါ်​လွ​င်ေ​န​မှာ​ပါ..
ဖက်ရှ​င်ေ​တွ ဒီ​ဇို​င်းေ​တွ​မှာေ​တာ့ harmony တွဲ​တာ​ဟာ staticြ​ဖစ်တ​ယ်..ြ​ငိမ်သက်တ​ယ်ြေ​ပြ​ပစ်တ​ယ်.. contrast colorေ​တွ​ဟာေ​တာ့ dynamic ပဲ.. ထိုးေ​ဖာက်တ​ယ် လှုပ်ရှား​တ​ယ်ေ​ပါ့.. ဒီေ​တာ့ ဒီ​ဇို​င်း​သမားေ​တွ​ဟာ ဒီ​လို အေ​ရာင်သေ​ဘာ​တရားေ​တွ​ကို သိ​ထားြ​ပီး​တဲ့​အခါ ကိုယ်အ​လုပ်လုပ်ရ​မ​ယ့် ဒီ​ဇို​င်း​ရဲ့​​အေြ​ခ​အေ​န​ကို လို​က်ြ​ပီး Staticြ​ဖစ်တဲ့ အခ​န့်​​အထည်ဒီ​ဇို​င်း​ကို​ဆွဲ​ရ​မှာ​လား.. Dynamicြ​ဖစ်တဲ့ လှုပ်ရှား​သွက်လက်တဲ့ သေ​ဘာ​တရား​ကို မိေ​အာင်ဆွဲ​ရ​မှာ​လား ဆုံးြ​ဖ​တ်ြ​ပီး အေ​ရာ​င်ေ​တွ​ကို လိုက်ဖ​က်ေ​အာ​င် သုံး​သ​င့်​ပါ​တ​ယ်..
အေ​ရာ​င်ေ​တွ​အေြ​ကာ​င်း​ကေ​တာ့ အေြ​ခ​ခံ​အေ​ရာင်စက်ဝို​င်း​ကို​သိ​ရုံ​ဆိုေ​တာ့ ဒီေ​လာက်ပဲြေ​ပာြ​ပေ​တာ့​မ​ယ်.. Composition လို့ေ​ခါ်​တဲ့ေ​န​ရာ​ထား​သိုြ​ခ​င်း​အေြ​ကာ​င်း​ကိုေ​တာ့ ဆ​က်ေ​ရး​ပါ​ဦး​မ​ယ်.. (မြ​ကာ​မီ လာ​မ​ည်.. မြှော်..ေ​ပါ့ေ​နာ်) =)peace.. to all !!
Share Tweet Posted by NangNyi at 12:56 pm
မြန်မာနှစ်သစ်ကူးချိန် ရောက်ပြန်ပြီ..ဒီနှစ်တော်တော်လေး မျက်စိနောက်သက်သာနေသလိုပဲ..ကြောင်ကြောင်ကြားကြား ကို့ယို့ကားယားတွေ အရင်လောက်မမြင်မိဘူးထင်တယ်.. အသိမိတ်ဆွေတွေတော်တော်များများ ခရီးသွားဖို့ ပြင်နေကြလေရဲ့.. ကိုယ်တိုင်လည်း တောင်ကြီးမဟုတ်တဲ့ တခြားတစ်နေရာကို ခရီးသွားဖြစ်မယ်.. ခဏတော့ နေရစ်ခဲ့ဦး ရန်ကုန်.. သင်္ကြန်ကို ဘာလို့ရင်မခုန်တာလဲလို့ တခါတလေပြန်တွေးကြည့်မိတယ်..နေပူပူထဲမှာ ရေစိုရတာကို မကြိုက်ဘူး.. ပုံပျက်ပန်းပျက် မူးရူးအော်ဟစ်နေကြတွေကို မကြည့်ချင်ဘူး.. ရိုးရာအမွေနှစ်တွေပျောက်ပြီး သင်္ကြန်ဆိုတဲ့ရသပျောက်နေတာကိုလည်း မနှစ်သက်နိုင်ဘူး.. ပိတောက်ကိုလည်း မချစ်ဘူး.. နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်း သင်္ကြန်ဟာ ကိုယ်နဲ့ အဝေးကြီးကနေ မသိမသာစီးဆင်းမြဲ..
သင်္ကြန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဒီဇိုင်း ၃ ခု ၄ ခု လုပ်ဖြစ်တယ်..တစ်ခုက လုံးဝ သင်္ကြန်ဖော်မယ်လ်.. ပိတောက်ပန်းနဲ့ ဖလားနဲ့.. ကောင်မလေးလှလှလေး နှစ်ယောက်က ပြုံးရယ်လို့ လက်အုပ်ချီထားတယ်.. နှစ်သစ်ဆုတောင်းကလည်း တခမ်းတနား.. နောက်တစ်ခုက လူငယ်တွေဦးစီး စီစဉ်တဲ့ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်တစ်ခု.. အနက်ကို အဓိကအရောင်အနေနဲ့ထားတယ်.. တောက်တောက်ပပ ပေါ်လွင်တဲ့အရောင်တွေ သုံးတယ်.. လုံးဝခေတ်သစ်သင်္ကြန်.. နောက်တစ်ခုက နှစ်မျိုးစပ်ခေါ်ရမယ်.. ပိတောက်မပါ ဖလားမပါ.. သို့သော် အခန့်အထည် သပ်ရပ်တောက်ပတဲ့ အရောင်တွေကိုသုံးတယ်.. လူတိုင်း လူတိုင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတိုင်းဟာ သင်္ကြန်ကို ကိုယ့်ပုံစံနဲ့ ကိုယ်ဖြတ်သန်းကြတာချည်းပဲထင်တယ်.. သင်္ကြန်တိုင်းမှာ ကိုယ့်နေရာတွေက ပြောင်းနေတာလည်း ဘာလို့လဲမသိဘူး..မတည်မငြိမ်တဲ့ အလုပ်အကိုင်ကိုပဲ သဘောကျနေတာလည်းပါမယ်.. ကိုယ်တိုင်ကိုက ပြောင်းလဲ လှုပ်ရှားရတဲ့သဘာဝကို နှစ်သက်တာကိုး.. နောက်နှစ် တိုင်းရင်းသားဒေသတစ်ခုခုမှာ သင်္ကြန်ကျချင်နေတယ်.. ခရီးသွားမယ် ခရီးသွားမယ်.. တစ်နေရာထဲမှာ ငြိမ်သက်ပိတ်မိနေရရင် သေသွားမယ်ထင်တယ်.. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းသောနှစ်သစ်တစ်ခုကို စိတ်ချမ်းသာစွာ ကြိုဆိုမယ်.. ကောင်းတာတွေ ဆက်ပြီး ထိန်းသိမ်းသယ်ဆောင်.. မကောင်းတာတွေ တတ်နိုင်သလောက် ချန်ခဲ့.. မကောင်းမှန်းသိပေမယ့် မစွန့်ချင်တာတချို့လည်း ယူလာဦးမယ်.. မကောင်းတာမရှိရင် ကိုယ့်ကောင်းတာလေးတွေ မပေါ်လွင်ဘဲနေမှာလည်းစိုးလို့ပါ..း)
Share Tweet Posted by NangNyi at 4:49 pm
ရုံးမှာ ပျင်းတယ်လို့ ပြောမိတိုင်း တော်တော်များများက ပျော်စရာ ရှာလုပ်ဖို့ပဲ ပြောကြတယ်.. ဒီနေ့တော့ ထူးထူးခြားခြား သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြန်မေးတယ်.. "အလုပ်လုပ်ဖို့ပျင်းနေတာလား.. အလုပ်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ဟာတွေကို လုပ်ဖို့ပျင်းတာလား"တဲ့.. ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့.. အလုပ်လုပ်ဖို့ ပျင်းနေတာ မဟုတ်မှန်းတော့ သေချာတယ်.. တခါတလေ စိတ်လေလွင့်နေပြီး စာမဖတ်ချင်.. မလေ့လာချင်.. ဒီဇိုင်းတွေမဆွဲချင် ဖြစ်တတ်တာကလွဲရင် အလုပ်လုပ်ဖို့ မပျင်းတတ်ပါဘူး.. ခုက အလုပ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အလုပ်မဟုတ်တာတွေ မလုပ်ချင်ဘူး ဖြစ်နေတာ..
ရုံးမှာမဟုတ်ဘဲ ပိတ်ရက်တွေလည်း ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင် ကလစ်ကလစ်နဲ့ ပုံတွေဆွဲ.. ဂျလိဂျလိနဲ့ စာဖတ်/ကျက်.. ရွှိရွှိဆိုပြီး အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေပေါ် ကူးသန်းနေထိုင်.. ရုံးမှာဆိုလည်း.. ကလစ် ကလစ်.. ဂျလိ ဂျလိ.. ရွှိရွှိ.. ဒါမယ့် ရုံးမှာဆိုရင် အဲ့ဟာတွေလုပ်ရတာကိုတောင်မှ အသက်မပါဘူုးဖြစ်နေတယ်..
ယူနီဖောင်းဝတ်ရတာဟာ ဝန်ထမ်းတွေကို တူညီစေတယ်.. မကွဲမပြား တသားထဲဖြစ်စေတယ်.. ကောင်းပါတယ်.. ယူနီဖောင်း ဝတ်လိုက်တာနဲ့ "ငါဟာ အလုပ်ထဲမှာ".. "ငါဟာ တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်".. "ငါဟာဒီရုံးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို စောင့်ထိန်းရမယ်".. ဆိုတာတွေပါ ပေါ်လာစေတယ်.. ကောင်းချက်များပါတယ်.. တစ်နေ့တစ်နေ့ ဘာဝတ်ရမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားနေဖို့လည်း မလိုတော့ ခေါင်းရှုပ်သက်သာတယ်ခေါ်ရမယ်..
မကောင်းတာက.. အဲ့ဒိ တာဝန်စိတ်တွေကြောင့်ပဲ ထိန်းချုပ်မှုတွေ စိတ်ကျဉ်းကျပ်တာတွေ ပေါ်လာတယ်.. နေ့တိုင်း နေ့တိုင်း ဒီအခန်း ဒီလူ ဒီဝတ်စုံတွေပဲ မြင်ရတာ လူပါ နမူးနထိုင်းဖြစ်လာသလိုခံစားရတယ်.. ဆန်းသစ်တီထွင်တဲ့ အလုပ်မျိုးတွေလုပ်ရတဲ့ creation သမားတွေအတွက်ပိုဆိုးမလားမသိဘူး.. (လောလောဆယ်တော့ personally .. အဲ့သလို ခံစားနေရတယ်)
Share Tweet Posted by NangNyi at 3:26 pm
Share Tweet Posted by NangNyi at 10:54 am
အဖြစ်အပျက်ကို အလုံးစုံသဘောပေါက်သွားတဲ့ A ကလည်း ခုမှ ဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့ `ကောင်းကောင်းပြောရအောင် ကောင်းတဲ့ကိစ္စကိုလုပ်တာမှမဟုတ်တာ.. လူတွေကလည်း အဆင့်ကိုမရှိဘူး..´ ဘာညာ ဘာညာနဲ့ ပြောတော့တာပေါ့.. လူတွေကလည်း အကုန်ဝိုင်းကြည့်.. သဘောပေါက်သွားတဲ့လူတွေကလည်း တီးတိုးတီးတိုးတွေပြောနဲ့ဆိုတော့ ဟိုလူလည်း အတော်ကျွတ်သွားပြီး ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဖျက်ပြီး ထောင့်လေးမှာ သွားထိုင်နေရတယ်တဲ့.. မိန်းကလေး ၂ ယောက်သားလည်း ဒေါသတွေထွက် မွှန်ထူပြီး ရဲတိုင်ပစ်မယ်တွေရော ဘာတွေရော ပြောမိနေတာပေါ့လေ.. နန်းညီဆီကို ဖုန်းဆက်လာတဲ့အချိန်ထိ သူတို့မှာ ဒေါသက မပြေသေးတာသာကြည့်.. အဖြစ်အပျက်ကတော့ အဲဒါပဲ.. လျှပ်ပေါ်လော်လီဝတ်စားထားတာလည်းမဟုတ်.. ဘာမှ ထူးခြားကွဲပြားနေတာလည်း မဟုတ်ပါဘဲနဲ့ သူ့မှာ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ဗီဒီယိုတောင် ခိုးရိုက်ရတာလဲ.. တကယ်လို့ မလည်မ၀ယ်မိန်းကလေးသာဆိုရင် ဘုမသိဘမသိ ခံလိုက်ရဦးမယ်.. ဖျက်တာလား Back ပြန်သွားပြီး မျက်စိကိုလှည့်စားလိုက်တာလား ဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မှာလဲ.. ဖုန်းတွေမှာ ကင်မရာတွေပါလာတာဟာ ဒီလိုတလွဲနေရာတွေမှာ သုံးဖို့ပဲများထင်နေလားမသိ.. အကယ်၍သာ စိတ်မထိန်းနိုင်တဲ့ ကောင်လေးတွေသာ အနားမှာရှိရင် သို့မဟုတ် ဒီမိန်းကလေးတွေမှာ မိဘမောင်ဘွားတွေပါလာနေရင် ၀ိုင်းတောင် အရိုက်ခံရနိုင်တယ်ဆိုတာ မတွက်မိဘူးလားမသိ.. သူလုပ်တာကို ဘယ်သူမှ မသိဘဲပြီးသွားမယ်ထင်နေလားမသိ.. အရင်ကလည်း ဒါမျိုးတွေ လုပ်လေ့ရှိတာပဲလားမသိ.. စောင့်ထိန်းရမယ့် ကျင့်ဝတ်ဆိုတာကို နားမလည်ဘူးလားမသိ.. ဒါမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတာ ရှက်စရာကောင်းမှန်း မသိဘူးလားမသိ.. မရှက်တတ်ဘူးလားမသိ..
အို.. မသိ .. မသိ.. မသိ … Share Tweet Posted by NangNyi at 12:04 pm